Homeसमाचारघाँ टिमा च क्कु छि’राउने जादुगर भेटि,जीउँदै मान्छेको घा टिँमा च क्कु(भिडियो हेर्नु’स)
January 20, 2022 admin समाचार 3732
विभिन्न कला देखाएर मान्छेले पैसा कमाउने माध्यम बनाएका छ्न । यस्तै लमजुङ बेसिरहर ‘घर भएका ३५ वर्षिय डेबिट जादुकर अहिले आफ्नो जादुले निकै भाइरल भएका छ्न । डेबिटको जादु हेर्न मान्छे’हरूको भिड निकै हुने गरेको देखिन्छ । आफु २२ वर्ष देखि जादु देखाउदै आएको डेबिटले बताएका छ्न । साने उमेर देखि धेरै पैसा कमाउने उदेश्यले जादु गरेको डेबिटले ब’ताएका छ्न । जादु मान्छेको आँखा छल्ने एउटा कला मात्र भएको डेबिटले बताएका छन् ।
जुनसुकै मान्छेले सा’मान्यतया अलिक फरक खालको कुनै कला देखाउ नै जादु भएको डेबिट बताउँछन । यी कुराहरु वास्त’विक भने केही नहुने उनले बताए । आफुले घाँटिमा चक्कु हानेर मान्छे मार्ने र फेरि बचाउने वास्त’विकता भए भए डाक्टर किन चाहियो भअन्दै प्रश्न गर्छ्न डेबिट । जादु भनेको अरुको आँखा छल्न सक्ने एउटा कला मात्र भएको डिबिटले बताएका छन । जादु भनेको मान्छेको एउटा आडिया भएको भन्दै अरु कुनै तन्त्र मन्त्र नहुने उनले बता’एका छ्न ।
जादु भनेको अन्य क’ला जस्तै भएकोले यसलाई पनि महत्व दिनु पर्ने उनले बताए । नेपालमा जादु भनेको कुनै तन्त्र मन्त्र भन्दै नकारात्मक सोच रहेको उनले बताए । तर कतिपय बुझ्ने मा’न्छेले राम्रो हौसला पनि दिने गरेको उनले बताए । सबै मान्छेको सोच बिचार एउटै नहुने भन्दै क’तिले राम्रो छ अझै राम्रो गर्नु भन्ने गरेको त कतिले गाली पनि गर्ने गरेको डेबिटको भनाई छ । आफु ५ वर्षको उमेरमा नै काठमाडौ आएको र सुरुमा घडी बेच्ने काम गरेको उनले बताए । पछि जादु सिकेर पोखरा आएको डेबिटले ब’ताएका छ्न ।
काठमा’डौमा पनि ४/५ वर्ष जति आफुले जादु देखाएको डेबिटले बताएका छ्न । आफूले जिन्दगीमा धेरै संघर्ष गर्दै आएको डेबिट बताउँछन । कयौँ दिन खान नपाएर भोकै पनि बसेको डेबिटले ब’ताएका छन् । नेपालमा १९ दिन आन्दोलन हुँदा आफुले अरुको जुत्ता चप्पल बेचेर समेत खाना खाने पैसा जम्मा गरेको डे’बिटले बताएका छ्न । अहिले भने जादु देखाएर नै आफुले गुजारा चलाएको डेबिटले बताएका छ्न । यसबाट राम्रो नै कमाई हुने उनले बता’ए ।
अहिले आ’फ्नो पेशा नै यहि भएको उनले बताए । बोल्ने र विभिन्न मनोरञ्जन कुराहरु देखेर मान्छेलाई जम्मा पार्ने गरेको डेबिटले बताएका छ्न । कमेडी तरिका बोल्दा सबैले मनोर’ञ्जन लिने उनको भनाई छ । तर कहिँले काहीँ जादु देखाउदा पुलिसले आफुलाई समातेर समेत लाने गरेको डेबिटले ब’ताएका छ्न । अहिले अफुले जादु देखाएर नै श्रीमती र छोरा पाल्दै आएको उनको भनाई छ । कहिले काहीँ कुनै समस्य लिएर कतै जादाँ तिमि त जादुकर हो जादु गरेर पैसा बनाउन पनि भन्ने गरेको डेबिटले बताएका छन् । आफु’लाइ अरु केहि काम गर्ने नआउने भएकोले जादु देखाउने गरेको उनको भनाई छ ।
भि’डियो हेर्नूस :-
मम धेरै खानुहुन्छ ? सा’वधान ! हुन सक्छ यस्तो समस्या
January 7, 2021 admin समाचार 7171
अहिले जा’डोको मौसम सुरु भएको छ । यो समयमा शहरी क्षेत्रमा बसो’बास गर्नेहरु धेरैको खाजाको रोजाई मम हुन सक्छ । हुनपनि मम नेपालीहरूमाझ लो’कप्रिय खाजा बनेको छ । छिटो मिठो भएकाले पनि मानिसहरूको रोजा’ईमा मम
अनिता र उनकी आमाजु दिदिका यति रमाइला टिकटकहरु ,अनितामा यतिसम्म सुधार (हेर्नुहोस् भिडियो)
June 23, 2021 admin समाचार 8304
अनिता खडका र विनोद खडका यो जोडी’लाई नचिन्ने सायदै कम होलान् ।यो जोडी ने’पालकै एउटा नमूना जोडीको रुपमा चिनिएको छ । टि`कटकबाट भा’इरल भएको यो जोडीको वास्तविकता निकै नै मा,’र्मिक र आ’त्मियताले भरिएको छ ।
October 19, 2020 admin समाचार 11556
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194100)